Bara Uru ma sie ike SEO Monitoring Tools
Anyị elebanyela anya anyị SERPS.com nwa oge ugbu a. Nchoputa Scott Krager gosiri anyị na mbụ nsụgharị na anyị nwere mmasị n'ezie. Anyị ejirila òkè anyị SEO nlekota oru tupu. Otú ọ dị, SEO na-agbanweNa ọtụtụ ngwaọrụ echebeghị.
Scott si otu nakweere mgbanwe na n'ezie wee na usoro nke dị nnọọ iche… na ike iwekota ozugbo na Google Analytics, nyochaa ihe ngosi mmadụ, tụọ ule ndapụta - niile affordably site a sleek ọrụ interface. Nke a abughi sọọsọ mmalite, agbanyeghị… SERPs ga - enyere gị aka nwalee mba niile n'elu mba 65!
Scott gosipụtara ndị a dị iche iche 4 dị iche iche na ikpo okwu:
Anyị Nyocha SEO atụmatụ bụ n'ezie idiocha. 3 clicks na ị nwere ike ịtọlite ​​ule mmekọrịta SEO iji hụ ihe na-arụ ọrụ yana ihe na-adịghị na oghere gị.
Nchịkọta isiokwu anyị kwa ụbọchị jikọtara ọnụ Google Analytics ya mere ị nwere ike ịhụ na ilele anya ihe mkpụrụ osisi dị ala maka gị bụ ụbọchị ọ bụla.
Dashboard na-ahapụ gị ngwa ngwa site na saịtị ma mee nlekọta ahụike dị na saịtị ọ bụla. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị jikwaa ọtụtụ saịtị.
Anyị nlele ihu peeji na-enye gị ohere ịhụ ngbanwe dị n'etiti ogo, okporo ụzọ na usoro mmekọrịta mmadụ na eserese anaghị eme ka anya gị gbaa ọbara.
Nke a bụ sneak peek nke SERPs na-abịa SEO nlele dashboard atụmatụ na arụmọrụ:
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwa ndị dị ebe ahụ na-efu ọtụtụ narị ma ọ bụ puku kwuru kwa ọnwa, SERPs amalite na $ 9 kwa ọnwaUgwo nke onye ahia obula nwere ike imeli (ma kwesiri iji ya). Ha kasị ukwuu ngwugwu-enye gị ohere soro 1,000 Keywords gafee 5,000 peeji nke $ 98 kwa ọnwa… bụghị ihe ọjọọ. Bido nke gi 14 ụbọchị ikpe ugbu a!
Tags: Google AnalyticsAnlekota oruseo n'elu ikpo okwuNyocha uleseo ngwá ọrụseo ngwaọrụserps
Jun 6, 2012 na 4:54 AM
Yaa enyi nke a bụ eziokwu na Google Analytics bụ n'ezie ezigbo seo tool and Webmaster tool also